Fikarohana momba ny firaisana Raharaha any Georgetown Bruce Lee | Abbas Alizada - Fikarohana momba ny vatana teraka
Proposed by: Ishtar Ishaya (1 / 23 / 18) ary Nesrin Meral (4 / 16 / 18)
Ireo mpanohana ny ReincarnationResearch.com dia nampahafantatra ahy ny lehilahy iray tany Afghanistan izay nitovy fitoviana amin'ilay kintan'ny haiady farany Bruce Bruce. Ity lehilahy ity, Abbas Alizada, dia nanjary liana tamin'ny sarimihetsika Bruce Lee fony izy 15 taona ary nanohy ny fifehezana ny haiady Bruce Lee nalaza. Nahazo laza sy malaza i Abbas tany Afghanistan ary nanjary fantatra amin'ny anarana hoe "Bruce Lee avy any Afghanistan."
Satria ny olona mitovy amin'ny olona iray taloha dia tsy midika fa ny bika aman'endrika dia maneho ny raharaha momba ny fanambadiana. Na izany aza, ny fikarohana momba ny fiterahana indray ao amin'ny vatana dia mampiseho fa matetika no mitovitovy amin'ny endriky ny endriky ny endriky ny tarehy.
Niara-niasa tamin'ny media mahaleo-tena Kevin Ryerson aho tamin'ny isam-bolana nanomboka tamin'ny 2001 ary hitako fa ny fanahin'ny fahitalavitra nantsoiny hoe Ahtun Re dia manana fahafahana hanao ny lalao miaina an-kalalahana miaraka amin'ny hasarobidiny.
Tamin'ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin dia nanamafy i Ahtun Re fa i Abbas Alizada no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Bruce Lee. Lahatsary iray ao amin'ny Abbas Alizada no omena eo amin'ny faran'ity pejy ity.
Nesrin Meral, iray amin'ireo olona izay nanolotra ity lalao iainan'ny fiainana ity, dia nanoratra lahatsoratra momba ity tranga ity. Ny lahatsoratra dia azo jerena amin'ny alàlan'ny rohy omena eto ambany:
Ny fiainana taloha dia misy fitoviana eo amin'ny fiainan'i Bruce Lee | Abbas Alizada
Fitoviana ara-batana: Misy fitoviana mitongilana eo amin'i Bruce Lee sy Abbas Alizada. Ny fampitahana sary azo omena dia avy amin'ny dawn.com. Kitiho ny sary mba hanitarana azy.
Ny fiainana taloha talenta: Abbas Alizada dia nanavao ny fahaiza-manaon'ny martial arahin'ny Bruce Lee.
Fiovan'ny maha-olona sy ny finoana: Teraka tany San Francisco i Bruce Lee. Ny ray aman-dreniny dia avy amin'ny lova Shinoa avy any Hong Kong ary i Bruce dia notezaina tany Hong Kong taorian'izay. I Bruce dia filozofika tamin'ny natiora ary voataona tamin'ny foto-pinoana ara-pivavahana tao amin'ny Bodisma sy taoisma.
Mifanohitra amin'izany, teraka tany Afghanistan i Abbas Alizada ary tamin'ny alàlan'ny tsy fahalalako ny fomba fiheviny ara-pinoana, azo inoana fa teraka tamina fianakaviana silamo ny.
Ny fahalalana fa ny fanahy iray dia afaka manova ny zom-pirenena sy ny fivavahana avy amin'ny androm-piainany iray manontolo dia afaka manampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolontsaina momba ny maha-izy azy.
Affiner Affinity: Abbas Alizada dia nanintona ny fiainany taloha. Antsoiko hoe "tranga misy ifandraisany" ireo karazana tranga ireo. Ny tranga hafa dia misy:
Ny firafitry ny sehatry ny fanambadiana ao amin'i Laurel sy Hardy | Bacher Boys